Ingabe ifenisha yokhuni oluqinile kufanele inakekelwe ngezinkathi ezine zonyaka? Indlela yokunakekela ngayinye? -Imboni ka-Alice
Abakhiqizi abahlinzeka ngamalebula amalebula ekhwalithi ephezulu ngamasevisi e-OEM
Ilebula Lebhodlela Lensimbi
Amabheji Alebula Aluminium
Ilebula le-Electroformed Nickel
Ilebula Lensimbi Engagqwali
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ukugcoba kufanele kwenziwe kanye ngekota, ukuze ifenisha yokhuni eqinile ibukeke icwebezela, futhi indawo engaphezulu ngeke imunce uthuli, okwenza kube lula ukuyihlanza. Kuphela ngokunaka ukuhlanza nokugcinwa kwansuku zonke kungenza ifenisha yokhuni oluqinile ihlale phakade.
Okokuqala, kuqinisekile ukuthi ifenisha yokhuni oluqinile kufanele igcinwe ngokuhambisana nokushintsha kwesimo sezulu kulezi zikhathi ezine zonyaka.
Izindlela zokulondoloza izinkathi ezine zonyaka zimi kanje.
①Intwasahlobo:Kunomoya entwasahlobo, futhi kunezinhlayiya ezihlukahlukene zempova, ama-willow catkins, uthuli, izibungu zothuli, isikhunta, njll. ezintantayo emoyeni. Lezi zinto ezingcolile zizomuncwa kuwo wonke amakhona efenisha. Ungasuli ngendwangu emanzi noma ngendwangu eyomile lapho uhlanza. , Uma kungenjalo kuzodala ukuhuzuka ebusweni befenisha. Ungalihlanzi ngezincibilikisi eziphilayo. Kungcono ukuyisula ngekotini eyomile nendwangu yelineni. Ngokungcola okungaphezulu kwefenisha, ungayigeza ngensipho emnene namanzi, bese uyomisa. I-wax yanele. ...
Ngaphezu kwalokho, izinga lokushisa liyashintsha, imvula yasentwasahlobo inomswakama kakhulu, futhi isimo sezulu sinomswakama. Kule nkathi, ukunakekelwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ekugcinweni kwefenisha yokhuni ukugcina igumbi lingena umoya. Uma phansi kumanzi, imilenze yefenisha kufanele iphakanyiswe kahle, ngaphandle kwalokho imilenze izogqwala kalula ngomswakama.
②Ihlobo:Izulu liyana ehlobo, futhi kufanele uhlale uvule amafasitela ukuze kungene umoya. Ukubekwa kwefenisha kufanele kulungiswe ngendlela efanele ukuze kugwenywe ukukhanya kwelanga okuqondile futhi kuhlanganiswe namakhethini uma kunesidingo. Ngenxa yesimo sezulu esishisayo sasehlobo, abantu basebenzisa ama-air conditioner njalo, ngakho-ke ama-air conditioner kufanele asetshenziswe ngobuhlakani nangendlela efanele ukuvikela ifenisha. Ukuvula i-air conditioner njalo kungakhipha umswakama, kunciphise ukumuncwa komswakama nokwandiswa kwezinkuni, futhi kugweme ukuvuvukala nokuguqulwa kwesakhiwo se-tenon. Umehluko omkhulu wokushisa udala umonakalo efenisha noma ukuguga ngaphambi kwesikhathi.
③Ikwindla: Ekwindla, umswakama womoya uphansi uma kuqhathaniswa, umoya wasendlini womile uma kuqhathaniswa, futhi kulula ukuyinakekela ifenisha yokhuni. Nakuba ilanga lasekwindla lingenalo udlame njengehlobo, ilanga lesikhathi eside nesimo sezulu esomile ngokwemvelo kwenza izinkuni zome kakhulu futhi zithambekele ekuqhekekeni futhi zibune kancane. Ngakho-ke, kusadingeka ukugwema ukukhanya kwelanga okuqondile.
Lapho isimo sezulu somile, gcina ifenisha yokhuni eqinile imanzi. Kufanele kusetshenziswe amafutha abalulekile okunakekelwa kwefenisha athathwa kalula yizintambo zokhuni. Isibonelo, uwoyela wewolintshi awukwazi nje ukukhiya umswakama okhunini ukuze uvimbele ukuqhekeka nokuguqulwa, kodwa futhi wondle ukhuni futhi wenze ifenisha yokhuni iphinde ibe nokukhanya kwayo ngaphakathi.
④Ubusika:Isimo sezulu somile kakhulu ebusika, okungase kuthiwe yinkathi ye-taboo kakhulu yefenisha yokhuni oluqinile, ngakho-ke kufanele kuqashelwe kakhulu. Isimo sezulu somile, futhi isikhathi sokuvula iwindi kufanele sifinyezwe ngangokunokwenzeka. Kunconywa ukusebenzisa i-humidifier ukulungisa umswakama womoya wasendlini. Luningi uthuli olomile ebusika. Indlela yokunakekela uthuli nokungcola okunqwabelene phezu kwefenisha iyafana naleyo yasentwasahlobo. Kuyafaneleka ukukhumbuza lapha ukuthi abangani abavame ukusebenzisa ukushisa kufanele baqaphele ukuthi bangabeki ifenisha eduze kokushisa, futhi bagweme ukushisa kwangaphakathi ngokweqile.
Ngalokhu vuma: Okuqukethwe okungenhla kuvela ku-inthanethi, futhi okuqukethwe ngelenkomba yakho kuphela. Uma wephula amalungelo akho, sicela usithinte futhi sizokususa ngokushesha.
U-Alice ungumkhiqizi wama-nameplates. Selokhu yasungulwa ngo-1998, izibophezele ekukhiqizeni amagama anembayo ahlukahlukene. Ngekhwalithi ephezulu kakhulu, isevisi ecabangelayo, nobuqotho obuhle, ihlinzeka amakhasimende ngohlu olugcwele lwezinsizakalo zezimpawu ezenziwe ngokwezifiso.
PHAMBI Indlela yokulondoloza kahle izinkuni zefenisha? -Alice ifektri
Ungazilungisa kanjani izibazi zefenisha yokhuni oluqinile lwe-mahogany-Ifektri ye-Alice OLANDELAYO